मन्त्रीले कार्यकर्तालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस मुख्यालयमा प्रदर्शन
७ आश्विन २०७८, बिहीबार १५:११ प्रकाशित
काठमाडौँ ७,असोज । ‘गुण्डागर्दी बन्द गर ! कार्यकर्ता कुट्न पाइँदैन ! विधान सम्मत क्रियाशील लागू गर !’ भन्दै कांग्रेस मुख्यालयमा नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धर्ना बसेको र कार्यकर्तालाई मन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै । शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिँदै आएका उनीहरुले बिहीबार भने नाराबाजी गरेका हुन् ।
धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला लगायत नेताहरु पुगेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै नेता शेखर कोइरालाले पार्टी कब्जा गर्ने नाउँमा गुण्डागर्दी मौलाएको समेत जिकिर गर्नु भयो ।
‘हरेक दिन क्रियाशीलका विषयमा फरक फरक निर्णय भइरहेका छन् । बिहान एउटा निर्णय हुन्छ, बेलुका अर्को हुन्छ । त्यही कारण प्रदेश २ को विवाद मिलेको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गर्ने नाममा जुन गुण्डागर्दी भएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन ।’ नेता कोइरालाले कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै जिल्लामा प्रहरी परिचालन गरेर अधिवेशन गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
मन्त्री सिंह र वडाध्यक्ष महत्तोका बीच क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर भएको विवादमा यादव र महत्तोबीच हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो ।
नेता अमरेशकुमार सिंहले भने पार्टीमा दारुवाला र भट्टीवालाको राज नचल्ने भन्दै । ‘पार्टी कब्जा गर्न दिदैनौँ, एउटा मन्त्रीबाटै कार्यकर्तामाथि जो हातपात भएको छ, यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । कार्यकर्ता कुट्ने मन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ,’ कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म पार्टी सभापतिसँग यो माग गर्दछु ।